Dowlada England oo balanqaaday shaqaale military oo somaliya ka taageera Nabada iyo deganaashaha. | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Dowlada England oo balanqaaday shaqaale military oo somaliya ka taageera Nabada iyo...
Dowlada England oo balanqaaday shaqaale military oo somaliya ka taageera Nabada iyo deganaashaha.
October 06 2015 ( Radio Baidoa) Kulankii dhawaan ee 70th ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobe, ayaa uu kaga dhawaaqay, Ra’iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron, in ay ku caawinayaan Qaramada Midoobay ciidamo si loogu diro soomaaliya, ayna u xoojiyaan horumarka iyo xasiloonida soomaaliya.
Shalay ayaa mar kale safiirka dowlada Ingiriiska ee Soomaaliya Harriet Mathews, waxaa ay qirtay in balanqaadyadaasi ay soomaaliya ka caawin doonaan aasaasida ammaan iyo mustaqbal wanaagsan oo barwaaqo ah, xili ay Suxufiyiinta Soomaalida ay kula kulantay Magaalada Muqdisho.
Wariye Dalsan Radio ka tirsan oo ka qeyb galay shir Jaraa’id oo ay qabatay ayaa weydiiyay safiirka dowlada Ingiriiska ee Soomaaliya Harriet Mathews, Sida 70 askeri oo Ingiriis ah oo Soomaaliya la keeno ay Ciidamada Nabad Ilaalinta u tababarayaan iyadoo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ay caawin doonaan soomaaliya? waxaana ay ku jawaabtay “ Waa Luuqad Diplomatic “diplomatic language” .
Sidoo kale waxaa ay hadalkeeda ay sii raacisay in waqtigii ay ku sugneen soomaaliya , in ay la dhacday ayna waxbadan ka baratay intii ay Muqdishu joogtay dhinaca dhaqanka soomaalida.
Ciidamada Soomaaliya loo soo dirayo ayuu sheegay Ra’iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron, inay gaarayaan 70 saraakiil oo tababarayaal ah oo gacan siin doona ciidamada Nabad illaalinta Afrika AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya. Halka ciidamo gaaraya 300 loo dirayo dalka Sudanta Koonfureed.